Ama-turbines amasha womoya angenabala angenza izinguquko zivuseleleke | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Kokuthunyelwe kwangaphambilini besikhuluma ngenkinga ye- imfucuza ekhiqizwa izindiza zomoya ophephela amapulazi omoya. Esikhathini esizayo esiseduze kuzofanele belashwe ngaphezu kwama-4.500 blades futhi usizakale ngalezo zinto.
Ukugwema imithelela ama-blade anayo ezinyonini, umthelela wokubuka, okonga ezintweni futhi uvikele ukudala imfucuza, amaphrojekthi we ophephela emoyeni ngaphandle kwezinhlamvu. Umshini ophephela emoyeni ungawakhiqiza kanjani amandla omoya ngaphandle kwamakhaba?
1 Iphrojekthi yeVortex Bladeless
2 Izici zomoya ophephela
3 Izinzuzo zomoya ophephela
Iphrojekthi yeVortex Bladeless
Le phrojekthi izama ukuguqula imishini yomoya engu-3-blade yamanje ibe yimishini yokuphehla ugesi engenacala. Uma kwenzeka kuba nokungabaza ngakho, la ma-turbine omoya ayakwazi ukukhiqiza amandla afanayo nalawo ajwayelekile, kepha ngokulondolozwa ezindlekweni zokukhiqiza nokugwema imithelela yalawa.
Njengoba ingenawo ama-blades, indlela yayo yokukhiqiza amandla kanye ne-morphology kanye nokwakheka kwayo kuhluke ngokuphelele kunalezi ezikhona manje. Labo ababhekele iphrojekthi yeVortex UDavid Suriol, uDavid Yáñez noRaúl Martín, abalingani enkampanini iDeutecno.
Lokhu kuncishiswa kwamakhasi kunikeza ithuba lokonga izinto zokwakha, ezokuthutha, ezokwakha, izindleko zokulungisa futhi kukhiqiza u-40% wamandla athe xaxa ngemali efanayo etshalwe kokujwayelekile.
Kusukela ngo-2006, ngesikhathi kufakwa ifayili lobunikazi bokuqala balo mklamo, sekwenziwe umsebenzi wokulungisa la ma-wind turbines. Ukuhlola ukusebenza kahle nokusebenza kahle kokukhiqizwa kwamandla, kwakhiwa umhubhe womoya ukuhlola nokulingisa iqiniso. Kufakazelwe i-prototype wind turbine engamamitha ama-3 ukuphakama.
Izici zomoya ophephela
Le divayisi yakhiwa ngesilinda esime mpo esiqinile, esigxunyekwe phansi nesikabani izinto zokwakha zingu-piezoelectric. Siyakhumbula ukuthi izinto zikaphayiyoelectric zingaguqula ukucindezela komshini kube ugesi, nogesi kube ukudlidliza kwemishini. I-Quartz iyisibonelo se-crystal piezoelectric crystal. Ngemuva kwalokho, amandla kagesi akhiqizwa ukuguquguquka okwenziwa yilezi zinto lapho zingena ekuvumelaneni nomoya. Ngendlela eqondakalayo, isebenza sengathi yibhola le-baseball libheke phansi, libheke phansi, futhi lishwiba.
Lokho i-turbine yomoya ezama ukukufeza ukusizakala Umphumela womgwaqo waseVon Kármán we-vortex. Umgwaqo i-von Kármán vortex uyindlela ephindaphindayo yama-eddy vortices adalwe ukwehlukaniswa okungamile kongqimba lwamanzi njengoba kudlula imizimba ecwilisiwe. Ngalo mphumela, i-turbine yomoya ingahamba ukusuka kolunye uhlangothi iye kolunye ukuze ikwazi ukusebenzisa amandla e-kinetic adaliwe bese iyiguqula ibe amandla kagesi.
Izinzuzo zomoya ophephela
Ezinye izinzuzo zale mishini emisha yomoya yilezi:
Izindleko eziphansi zezinto zokwakha nokuhlangana.
Izindleko zokugcina eziphansi.
Yehlisa umthelela kwezemvelo kanye nomthelela womhlaba.
Kusebenza kahle. Ikhiqiza amandla ahlanzekile ashibhile.
Isebenza ngobubanzi obukhulu bejubane lomoya.
Zithatha indawo encane.
Izinyoni ziphephile ekundizeni okuzungezile.
Umkhondo wekhabhoni wehliswa ngama-40%.
Zilungele izitshalo ezingasolwandle ngenxa yokuthi zilula ukufakwa nokunakekelwa.
Ngale nguquko yamandla omoya, izimakethe zizokhulisa ukulethwa kwalezi zomoya ezintsha ezonga izindleko futhi zigcine ukukhiqizwa okufanayo kukagesi. Ukufakwa kwesivivinyo esigcwele kuzoqedwa ngasekupheleni kwalo nyaka, ezizohlanganiswa namandla elanga ukunika amandla amakhaya eNdiya.
Ngaphezu kwalokho, iphrojekthi ithole ukwesekwa yiRepsol kanye nabanye abatshali bezimali abazimele abakhethé ukuthuthukiswa kwamandla omoya kanye nalokhu okusunguliwe kwenguquko. Intengo yemakethe ibizoba cishe ama-euro angama-5500 we-turbine yomoya ophakeme eyi-12,5 m. Kepha inhloso ukwakha i-Vortex yamamitha ayi-100 ngonyaka ka-2018, njengoba i-turbine iphakama, ukusebenza kakhulu kuzoba nokwengeza amandla amaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla omoya » Imishini yokuphehla ugesi emisha engenabala